EJalimane Inombolo Yefoni | Shayela Uhlu Lwezingcingo | Database lakamuva Lokuposa
EJalimane Inombolo Yefoni
Database lakamuva Lokuposa » EJalimane Inombolo Yefoni
EGerman Izinombolo Zocingo
Uhlu lwezinombolo zocingo lwaseJalimane lufakiwe lapha, database wabathengi abayizigidi ezintathu abavela eJalimane. Ukumaketha kwedijithali kungenye yezindlela ezinhle kakhulu zokuthuthukisa ibhizinisi. Ufika lapha lonke uhlu lwenombolo yocingo lwakamuva nolusha olwenzelwe ukuthuthukisa ibhizinisi lakho eJalimane.
Thenga uhlu lwefoni lwaseJalimane lokumaketha kwe-SMS noma imikhankaso yokubiza amakhaza ibhizinisi lakho. Uhlu lwefoni lwaseJalimane lunegama labathengi, ikheli, inombolo yocingo, idolobha njll.
Thenga iJalimane Consumer People Ucingo Ucingo
Izinombolo Zefoni Zonke: 3 Million
Namuhla, ukuthumelana izingcingo, ukukhangisa nge-sms kanye nemikhankaso yokubiza amakhaza kuyindlela ephumelelayo yokuthengisa. Abanye balabo bathuthukisa ibhizinisi lakho njenge-e-commerce futhi, noma bathengisa imikhiqizo nezinsizakalo zakho. Ngakho-ke, ukufeza le mikhankaso isidingo sakho sokuba nohlu olunembile kakhulu lwabathengi bezingcingo ukufeza inhloso yakho yokumaketha.
Idathabheyili Yokugcina Yamahhala noma i-latestdatabase.com inganikeza konke, ingasatholakali kwamanye amasayithi. Uhlu lwezinombolo zocingo lwabathengi baseJalimane luluhlu olunembile futhi oluyiqiniso lwabathengi emhlabeni wonke. Imininingo egciniwe ebaluleke kakhulu njengoba ifaka imininingwane eminingi ngabantu obabizayo futhi imininingwane efanele yokuxhumana nomthengi ekuphokophele kumakethe yakho ebekiwe.
Uhlu lwabathengi baseJalimane lwezinhla oluvela kuDatha Yokugcina Yamahhala noma i-latestdatabase.com iqukethe okulandelayo:
Izigidi ezingama-3 zivuselelwa ngemininingwane ephelele eqoqwe kusuka kumasayithi ahlukahlukene athembekile
Ukukunikeza izindleko eziphansi kakhulu ezifika ku- $ 13,500
EJalimane Inombolo Yefoni Umbuzo & Impendulo